माघी महोत्सवले अल्मल्यायो नेकपा कार्यदललाई,कार्यतालिका अनुसार काम भएन ! – YesKathmandu.com
माघी महोत्सवले अल्मल्यायो नेकपा कार्यदललाई,कार्यतालिका अनुसार काम भएन !
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली भनिएको कार्यदल अलमलमा परेको छ । पुष मसान्त भित्रै स्थायी कमिटीको बैठक बसेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीका मातहतका कमिटी एकीकरण गरिसक्ने उद्घोष स्थायी कमिटी बैठक सकिएको दिन भएको थियो ।
तर,कार्यदलले पुष मसान्तको समयसिमामा काम सम्पन्न गर्ने देखिएन । पुष १३ गते पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए । कंरेड रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ यस्ले पुष २५ भित्र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुको कार्य विभाजन पोलिटब्यूरो गठन लगाएत मातहतका कमिटी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नेछ र यहि महिना भित्र स्थायी कमिटी बैठक बसेर अनुमोदन गरिने छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने अनुसार पार्टी काम अघि बढ्न सकेन ।
पार्टीको काममा नेकपा कार्यतालिकाभन्दा ढिलो छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संगठनात्मक काम गर्न स्थायी समितिले बनाएको कार्यदलले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु । मुस्किलले कार्यदलका बैठकहरु बसिरहेका छन् । कार्यदलमा रहेका सदस्यहरु मध्ये ४ जना मन्त्रीहरु रहेका छन् । ४ मन्त्री मध्ये संघीय सरकारका ३ र एक मुख्यमन्त्री,मन्त्रीहरुको व्यस्तताका कारण पनि कार्यदलको बैठक सोचे अनुरुप समयमा हुन सकिरहेको छैन कार्यदलका एक सदस्यले एसकाठमाण्डौलाई जानकारी दिए । ‘त्यसमाथि माघि महोत्सवका कारण केही नेता र मन्त्रीहरु व्यस्त रहनु भएको छ तत्काल बैठक बस्ने अवस्था छैन । हामी उहाँहरुको पर्खाइमा छौ’ ।
‘उनले भने कार्यतालिकाअनुसार २५ पुसभित्रै दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पथ्र्यो। पुस मसान्तसम्म त्यसमा सचिवालयले छलफल गर्ने र बैठक डाक्ने निर्णय १३ पुसमा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन नै बनाइसकेको छैन। निर्धारित म्याद गुज्रिसकेको छ। तर, कार्यदल छलफलको प्रारम्भिक चरणमै छ। माघ पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउनेगरी काम भइरहेको छ’ । समयमा पार्टी काम सम्पन्न नहुँदा कार्यकर्तामा निरासा बढ्दै गएको छ । एकीकरण भएको ३ महिना भित्र पार्टीका जनवर्गीय संगठन तथा मातहतका ममिटी एकता सम्पन्न गरिसक्ने उद्घोष गरेको नेकपाले ८ महिना बितिसक्दा पनि सम्पन्न गर्न नसकेपछि राजनीतिक बृत्तमा नेकपा नेतृत्वको आलोचना चुलिएको हो ।
नेकपामा कुनै एक ब्यक्ति सर्वेसर्वा हुन सक्दैन: वरिष्ठ नेता नेपाल
निर्मला हत्या प्रकरणः बयान नसकिएपछि डिएसपी अंगुर जिसी न्यायिक हिरासतमा